သြဝါဒခံယူဖို့မလာတဲ့ ဆရာတော်တွေအတွက် မဟန ဘယ်လို ဆုံ...
29 ก.ค. 2562 - 21:40 น.
ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ မဟနက ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လကတည်းက ဆုံးဖြတ်ချက်ငါးချက်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့် ရှောက်ရေး ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း က မဟနရဲ့ လမ်းညွှန်မှု တောင်းထားကို ပယ်ချဖို့၊ အဲဒီအဖွဲ့ကို တရားမဝင် အဖွဲ့အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ဖို့၊ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကလည်း အဖွဲ့အမည်ကိုသုံးပြီး မည်သည့်အမှုကိစ္စကိုမျှမလုပ်ဖို့၊ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ၄၅ ရက်အတွင်း မြန်မာပြည် အနှံ့က အဖွဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဖြုတ်သိမ်းဖို့ နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလိုက်နာရင် သံဃာဆိုပါက သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာဥပဒေ ၁၉/၂၀ နဲ့အရေး ယူပြီး၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်း လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ အရေးယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ သြဝါဒခံယူဖို့မလာတဲ့ ဆရာတော်တွေအတွက် မဟန ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ